गोरु पो दुहुन गा ! | MYAGDINEPAL
Home / समाचार / गोरु पो दुहुन गा !
गोरु पो दुहुन गा !
बेनी बजारमा ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका नकुल ढकाल र मुना थापा मगरको नयाँ रोइला गित रुदै मेला पातैमा ले युट्युवमा निकै चर्चा बटुलेको छ । उनीहरुको गितको म्युजिक भिडियो बिन्दबासीनी म्युजिक कम्पनी बाट बजारमा आएको हो ।
हेरौ कस्तो छ त भिडियो
जुन सुकै क्षेत्रमा पनि पकड जमाउन सफल नाम खोज्दै जाने हो भने मुना थापा मगरको नाम भेटीने छ । नेपाली लोक स‌ंगितको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यो नाम थाहा नपाउने कमै होलान् । नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रको एउटा उत्कृष्ट ब्राण्ड बनेको नाम हो मुना थापा मगर भन्दा फरक नपर्ला ।
उनलाइ सबै क्षेत्र र सबै ठाँउका मानिसले निकै महत्व दिने सुमधुर स्वरकी धनी मुनाको सबै गीतहरुले चर्चा पाएकै छन् । त्यस्तै चर्चा पाउने शिलशिलामा अहिले उनको चर्चा चुलाउने काम गरेको छ रोइला गित रुदै मेला पातैमा ले । उनले रुदै मेला पातैमा बोलको रोईला गीतमा आवाज दिएकी मुनाको यो गीत छोटो समयमा हरेर लोकसंगित पारखिको मनमुटुमा बस्न सफल भईरहेको छ ।
बिन्दबासीनी म्युजकि प्रालिको युट्युब च्यानलमा एक हप्ता पहिला प्रकाशन भएको यो गितले ३० हजार भन्दा बढी हेरिएको छ । निकै रमाइला शब्दहरु समेटीएको यो गीतमा नकुल ढकालले मुनालाई स्वरमा साथ दिएका छन् । भिडीयोलाई भुपिन बानीयाँले निर्देशन गरेका छन् भने अभिनयमा सुष्मा अधिकारी र भरत रकालको जोडीले दमदार बनाएको छ ।
शब्द तथा संगित संयोजन नकुल ढकालकै रहेको यस गीतमा एरेन्जमेन्ट तारानाथ आचार्यले गरेका छन् ।
बाग्लुङ बलेवा घर भै बेनीमा बसोबास गर्दै आएका ढकालले बिगतमा पनि निकै मार्मीक शब्द स‌ंयोजन गर्दै गित बजारमा ल्याएका थिए भने यस पटकको गितले पनि बजारमा निकै चर्चा बटुल्ने आश लिएको बताएका छन् ।